अर्थ-वाणिज्य – Page 104 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
३ आश्विन २०७७, शनिबार ११:१५ English
चोर बाटोबाट चिनियाँ विमान भित्र्याउन लागेको खुलासा २० मंसिर २०६९, बुधबार १०:३७
नेपालमा लगानी भित्राउन रुसले सहयोग गर्ने २० मंसिर २०६९, बुधबार ०७:५८
चन्द्रकान्त खनाल, रुपन्देही २० मंसिर । नेपालका लागि रसियन राजदुत डा. सर्ज भेलिच्कनले नेपालमा लगानी भित्राउन आफ्नो देशले सहयोग गर्ने बताएका छन् । यस क्षेत्रको भ्रमणमा आएका राजदुत डा. सर्जले बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालको समृद्धिको..
लुम्बिनी एक्स्पो–२०१२ अन्र्तराष्टिय व्यापार मेलाको तयारी तिब्र १९ मंसिर २०६९, मंगलवार १२:४३
चन्द्रकान्त खनाल / रुपदेही, १९ मंसिर । रुपन्देही व्यापार संघको आयोजनामा बुटवलमा हुन लागेको लुम्बिनी एक्स्पो–२०१२ अन्र्तराष्टिय व्यापार मेलाको तयारी तिब्र गतिमा बढेको छ । पुस ६ गतेदेखि १९ गतेसम्म हुने मेलाको लागि स्टल बुकिङ सुरु भएको आयोजकले बताएका छन् । करिब ५ सय स्टल रहने मेलामा..
दश प्रतिशतले बढ्यो सुन्तला उत्पादन १९ मंसिर २०६९, मंगलवार १०:३२
उदयपुर, १९ मंसिर । चालु आवमा उदयपुरमा सुन्तला उत्पादनमा दश प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सुन्तला फुल्ने सिजनमा मौसम अनुकूल भएका कारण उत्पादनमा वृद्धि भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय उदयपुरका बागबानी विकास अधिकृत तिरपितनारायण मिश्रले बताए । करिब दुई हजार पाँच सय हेक्टरमा लगाइएको..
पर्यटक आगमनमा झिनो सुधार १८ मंसिर २०६९, सोमबार १५:४९
काठमाडौं, १८ मंसिर । अक्टोबर महिनामा केही घटेको पर्यटक आगमन नोभेम्बरमा बढेको छ । मुख्य पर्यटकीय सिजनका रूपमा लिइने नोभेम्बरमा हवाई मार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा झिनो वृद्धि भएको हो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै नेपाल पर्यटन..
गुल्मीमा यसबर्ष ९ करोडको सुन्तला बिक्रि हुने १७ मंसिर २०६९, आईतवार २३:२८
चन्द्रकान्त खनाल, रुपन्देही, १८ मंसिर । अन्य खेतीको तुलनामा सुन्तला खेतीबाट बढी आम्दानी भएपछि किसानहरु व्यवसायीक सुन्तला खेतीमा लागेका छन । अन्य खेती छोडेका किसानहरुले ६० र्वष देखि निरन्तर सुन्तला खेती मात्र र्गने गरेका छन । पछिल्ला बर्षहरुमा गाउँ गाउँसम्म सडक विस्तार भएको र..
वार्षिक अर्बो गुमाउँदै सरकार १७ मंसिर २०६९, आईतवार १२:०१
काठमाडौं, १७ मंसिर । सरकारले गैरनेपाली कामदारका लागि श्रम स्वीकृतिमा कडाइ गर्न नसक्दा बर्सेनि अर्बौ राजस्व गुम्ने गरेको छ । विदेशी कामदारको प्रभावकारी अनुगमन नहुने र तिनलाई श्रम स्वीकृतिमा समेत कडाइ नहुँदा राजस्व असुली हुन नसकेको हो । एक विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृतबापत..
भारतीग गृहसचिवद्वारा वीरगञ्जको चेक पोस्ट निरीक्षण १७ मंसिर २०६९, आईतवार ११:४६
वीरगन्ज, १७ मंसिर । भारतीय गृहसचिव राजकुमार सिंहले सीमावर्ती रक्सौलको पनटोकामा निर्माणाधीन वीरगन्ज रक्सौल एकीकृत भन्सार चेकपोस्टको निरीक्षण गरी आवश्यक जानकारी लिएको राससले जनाएको छ। कोलकोता बन्दरगाहबाट सबैभन्दा छोटो दूरीमा रहेको निर्माणाधीन आधुनिक सुविधा सम्पन्न भन्सार..
मुलुकभर प्रभावकारी रुपमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरीने १६ मंसिर २०६९, शनिबार १२:३६
काठमाडौ, १६ मंसिर । मुलुकभर सुपथ मूल्य पसल प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । सरकारले सुपथ मुल्यको पसल सञ्चालन गर्ने नीति प्रभावकारी नभएपछि यसलाई ब्यवस्थित गर्न लागेको छ । सरकारले अनुदान दिएर सुपथ मुल्य सहकारी पसल सञ्चालनको ब्यवस्था गरेपनि प्रभावकारी नभएपछि त्यसलाई..
एकीकृत लाइसेन्समा दुई कम्पनीको मात्र चासो १६ मंसिर २०६९, शनिबार १२:२६
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वैशाखमा साना कम्पनी लक्षित गरी खुला गरेको ‘एकीकृत लाइसेन्स’ मा जान दूरसञ्चार कम्पनीहरूले चासो देखाएका छन् । सबैखाले दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न पाउने एकीकृत लाइसेन्सका लागि दुईवटा कम्पनीले आवेदन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ..
चीनबाट ६ वटा जहाज ल्याउने सम्झौता १५ मंसिर २०६९, शुक्रबार ०८:५२
काठमाडौ, १५ मंसिर । नेपाल वायु सेवा निगमले आन्तरिक उडानका लागि चिनबाट ६ जहाज ल्याउने भएको छ । जाहाज खरिदका लागि चिनियाँ जहाज उत्पादक एभिक इन्टरनेसनल एसियासँग व्यापारिक सम्झौता समेत गरेको छ । यसले जहाज आउने अन्तिम सम्झौता नभए पनि यसले जहाज ल्याउने बाटो खुला गरेको छ । चीन सरकारले २ वटा..
मकवानपुरमा तेल उत्पादन प्रक्रिया रोकियो १५ मंसिर २०६९, शुक्रबार ०८:४३
मकवानपुर, १५ मंसिर । मकवनपुरको नामाटारमा जंगली जडीबुटीबाट उत्पादन गरिने तेलको उत्पादन प्रतिmया रोकिएको छ । मकवानपुरको नामटार गाविस–३ अधोरमा स्यानियको पहलमा थालिएको धसिङगारेको तेल उत्पादन कार्य बन्द भएको हो । जडीबुटीमा ज्ञान भएका स्थानीय केही व्यक्तिको पहलमा सञ्चालनमा रहेको..
‘उजुरी आठ सय, मुद्धा दायर ५१’ १४ मंसिर २०६९, बिहीबार १५:५८
काठमाडौं, १४ मंसिर । वैदेशिक रोजगारीका नाममा करोडौं रुपियाँ ठगी भएको भन्दै उजुरी पर्ने गरेको छ । तर, ठगीको फरफारक र अदालतमा मुद्दा दायर भने न्यून मात्र हुने गरेको छ । कमजोर सरकारी संयन्त्रका कारण ठगी उजुरीको मुख्य दोषी पहिचानमा ढिलाइ हुने गरेकाले समयमै मुद्दा दायर नहुँदा पीडितले..
बाह्र लाख पाएपछि बिल फस्र्योट १४ मंसिर २०६९, बिहीबार ०८:२५
हेटौंडा, १४ मंसिर । सिँचाइ कार्यालय मकवानपुरका प्रमुखले रकम लिएर योजना फस्र्योट गरेका छन् । किसानका लागि आएको योजनामा कार्यालय प्रमुखले १२ लाख रुपियाँ लिएर बिल फस्र्योट गरेका हुन् । मोतिपुर सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत मकवानपुरको फापरबारी–५ पाथिभरामा भएको सिँचाइको बिल फस्र्योटमा दुई..
फेरी बढ्यो रासायनिक मल अभाव १४ मंसिर २०६९, बिहीबार ०८:२१
काठमाडौ, १४ मंसिर । धान रोप्ने समयमा मल नपाएर सास्ती भोगेका किसानले हिउँदे वालीका लागि पनि मल नपाउने भएका छन् । मल नपाउने देखेर उनीहरुले अहिले नै खरिद गरी सञ्चित गरेर राख्न थालेका छन् । गहुँ र तोरी खेती लगाउने बेला भएकाले किसानले समयमै मल सञ्चित गर्न थालेका हुन् । कृषि सामग्री..
सहकारी सुधार कार्ययोजना निर्माण १३ मंसिर २०६९, बुधबार १६:२३
काठमाडौं, १३ मंसिर । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत गई सञ्चालन भइरहेकाले विभागले सुधार कार्ययोजना निर्माण गरेको हो । यस कार्ययोजनालाई केही दिनभित्रै..
३ आश्विन २०७७, शनिबार ११:०४
बार्यन म्युनिखले गर्‍यो गोलको बर्षा
३ आश्विन २०७७, शनिबार १०:५९
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसको अवसर पारेर २८९ कैदीबन्दीको कैद माफीमिनाहा गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को..